WARBIXIN XOG BADAN: Ganacsatada Puntland maxay tahay Danta ugu jirtaa Amaan darro & Ka hor imaadka Horumarka Dekedda Boosaaso? – Puntlandtimes
November 1, 2017 W LAASCAANO
BOOSAASO(P-TIMES)- Saacadihii ugu dambeeyey magaalada Boosaaso waxaa ka taagnaa Is qabqabsi iyo xanibaad ay soo rogeen Ganacsatada Puntland ee kunool magaaladaas, kuwaas oo diiday in ay Doonyaha iyo Maraakiibtooda sidda shixnadaha Ganacsi ay ku dajiyaan Dekedda, iyagoo raacaya Nidaamka casriga ah ee loo dajiyey dekedda.
Dawladda Puntland ayaa heshiis la saxiixatay Shirkada P & O oo qeyb ka ah Shirkada weyn ee DP WORLD, waxayna ku wareejisay Dekeda Boosaaso oo ay ku sameyn doonto dibu habeyn balaaran iyo dhismaha Deked cusub oo laga dhisayo isla goobtan.
Shirkadda ayaa si rasmi ah shaqada ula wareegtay bilowgii todobaadkan, waxayna soo saartay amaro ku saabsan xaaladda Dekeda, kuwaas oo ay ka mid yihiin hubinta Amniga bad-qabka dekedda, Ganacsatada oo lasiiyey Aqoonsiyo iyo cid kasta oo lala soconaya ujeedada ay ka doonayso dekedda.
Nidaamka cusub ayaa dhabaha u xaaray in ay Dekedu mar horeba u ekaato meel horumar ka bilowday, waxaana Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu amray 18-kii Bishii October in la baneeyo gudaha Dekedda iyo inta lagu wareejiyey shirkadda si shaqada loogu qabto.
CABASHADA CUSUB EE GANACSATADA MAXAA KA RUN AH?
Ganacsatada Boosaaso waxay isla bilowgii todobaadkan bilaabeen cunaqabateyn cusub oo ay ku soo rogeen Shacabka Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed ee ay gaareen adeegyadooda, waxayna sheegeen in lasoo rogay lacago dheeraad ah, balse dawladda ayaa gabi ahaanba beenisay arrimahaas.
Wasiiradda Maaliyada, Dekeddaha, Maamulka gobalka Barri, Kan degmada Boosaaso & Shirkada P & O ayaa beeniyey in lacago la kordhiyey, waxayna sheegeen in dibu habeyn lagu sameeyey nidaamka shaqada oo aysan jirin wax lacag ah oo la kordhiyey.
Isimadda gobalka oo arrimahan faragalin ku sameeyey ayaa ogaaday Xaqiiqada taala, waxayna ka codsadeen labada dhinacba in ay magacaabaan guddi ka kala socda oo ay soo xaqiijiyaan sidda ay wax ku socdaan.
HANJABAADA GANACSATADA & QORSHAHA GURACAN.
Ilo ku dhaw dhaw labadii shir ee ugu dambeeyey ayaa cadeynaya in ay Ganacsatadu ku hanjabeen in ay kicinayaan Shacabka oo ay sameynayaan wax kasta oo ay awoodaan, iyagoo shacabka u sheegaya wararka ah in la kordhiyey lacagta Canshuurta ee horey loo qaadi jiray.
Sadex kamid ah Ganacsatada ugu waa weyn oo u muuqday kuwa ay dano siyaasadeed ka dambeeyaan ayaa shirkii ugu dambeeyey ku hanjabay in ay adeegsan doonaan awood kasta oo ay awoodaan ay Maraakiibta soo xirayaan.
MA DHAB-BAA IN GANACSATADU LA DHUUMATO CANSHUURAHA KU WAAJIBAY?
Horey marar badan ayaa loogu eedeeyey ganacsatadu in aysan bixin Canshuurta saxda ah, balse ay bixinayaan Canshuur yar oo ay ka qaado Wasaaradda Maaliyada, Doonyaha imaanaya ayaa sidaas oo kale bixinaya Khidmad yar oo aan aheyn midda sida saxda ah ugu waajibtay.
Ganacsatada ayaa ka cararaya in laga guuro nidaamka Musuqmaasuqa ahaa ee ay marin jireen Hantidooda, waxayna diideen in gabi ahaanba Shay kasta gaar loo Canshuuro oo ay keenan gaadiidka Badda ee soo xiranaya.
Si ay uga hortagaan in laga qaado Canshuurta ku waajibtay, ulana baxsadaan Canshuurahan ayey bilaabeen in ay qorshahooda fushadaan arrinta ah in la kordhiyey Lacagta dekeda magaalada Boosaaso.
MAXAA KULMIYEY FICILADA SIYAASADDA & FADQALALADA GANACSATADA?
Ganacsatada ugu waa weyn ee magaalada Boosaaso ayaa horey siddan oo kale cabasho uga muujiyey lacagta Shilingka Soomaaliga, waxaana ugu dambeyntii la ogaaday in ay iyagu lahaayeen khaladkii ay ku eedaynayaan Wasaaradda Maaliyada ee dawladda Puntland.
Xiligaas waxay sheegeen in Dawladdu kordhisay Canshuurta laga qaado Alaabaha soo dagaya iyo kuwa dhoofaya, laakiin taas ayaa noqotay mid ay qaadan waayeen Shacabka nabadda jecel.
Bixinta lacagaha ay siiyaan kooxaha ka dagaalamaya buuraleyda gobalka Barri ayay dawladdu si adag uga hadashay, waxayna laamaha Amnigu diiradda saareen in lasoo saaro baaritaanada, taas oo kaliftay in ay joojiyeen talaabo kasta oo ay wadeen.
Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtay Boosaaso, ku eedeeyey in ay yihiin kuwa cabsanaya oo lacagaha ku diraya Buuraleyda, xili aysan si sax ah u bixin Canshuuraha sharciga ah ee lagu leeyahay, taas oo ka dhigan in ay haddana doonayaan in ay la dhuuntaan lacagaha ku waajibay.
MAXAA KA DHAB AH QEYLO DHAANTA KOOXO IS BIIRSADAY?
Ka sokow arrimahaas kooxo isku biiray oo leh Ganacsato ilaashanaya dano khaas ah iyo kooxo meel kale ka shidaal-qaadanaya diidan horumarka Puntland ayaa doonaya in uu fashilmo mashruuca dhismaha & Balaarinta dekeda magaalada Boosaaso.
Laakiin dawladda Puntland ayaa balan qaaday in ay gacan bir ah ku qaban doonto kooxahaas, oo ay cadaaladda horkeeni doonto, waxaana qaarkood dhawaan ay cadeeyeen in ay meelo kale ka shidaal-qaadanayaan.
Dawladda Puntland waxay sheegtay in aan cidna loo joojin doono dibu dhiska iyo sare u qaadida kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka, waxaana Wasiirka Dekeddaha & Amniga Baddaha Siciid Maxamed Raage cadeeyey in ay dawladdu fulinayso mashruucan muhiimka ah.
YEY DANI UGU JIRTAA NABADDU & HORUMARKA?
Shaki ma saarna in Ganacsatadu yihiin cidda ugu badan ee ka faa’iida Nabadda iyo daganaanshaha ay maalin kasta u dhimanayaan wiilasha iyo gabdhaha banaanada kula hardamaya cadowyada ka soo horjeeda Amniga iyo daganaanshaha.
Laakiin Ganacsatada ayaa u muuqda kuwa u gacan-haatinaya kuwa ka soo horjeeda Amniga, bacdamaa ay bilaabeen in ay kiciyaan Shacabka oo ay iska horkeenan ciidamada iyo dadweynaha, taas oo miraha laga guranayo uu yahay waji aan wanaagsaneyn.
Ganacsade ma ganacsan doono, haddii uu Amnigu faraha ka baxo, sidaas oo kale kuwa nabadda diidan waxay helayaan jaanis ay ku fushadaan falalka amaan darro, waxaana masuuliyadaas dusha u ridanaya cid kasta oo maanta ka shaqeysa in Boosaaso noqoto meel lagu banaanbaxo.
MAXAA LA GUDBOON, SHACABKA, DAWLADDA & GANACSATADA?
SHACABKA Puntland ayaa leh muhiimada ugu horeysa waxaana lagudboon in ay Ilaashadaan Nabadda iyo daganaanshahooda oo ay la shaqeeyaan ciidamada Amniga.
Shacabka ayaa leh awooda ugu sareysa ee dalka, iyagoo u maraya wadiiqooyinka Sharcigu u siiyey, waana mid kamid ah guulaha ay ku talaabsadeen Shacabku in la xisaabtam ay la sameeyaan dawladdooda.
Fursad ayay u leeyihiin in ay si xor ah u cabiraan aragtidooda oo aan loo mareyn nidaam wax u dhimaya Amniga iyo daganaanshaha, oo ay leedahay Puntland cadowyo badan.
DAWLADDA Puntland waxaa la gudboon in ay Shacabka si wanaagsan uga dhaadhiciso waxa isbedelay iyo barnaamijyada cusub ee ay tahay in ay ogaadaan, si aysan dhagahooda uga faa’iideysan kuwa ka soo horjeeda Horumarka iyo dibu dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka.
GANACSATADA, waxaa la joogaa xiligii ay huri lahaayeen Canshuurta ku waajibtay oo ay raacaan nidaamka iyo kala dambeynta, waxaana lama huraan ah in ay garowsadaan nabadda in lagu helo faa’iido weyn, oo haddii la horseedo amaan darro aan la ganacsan doonin.
Chief A Ibrahim says:
Wixii Shacabku diido waa in la joojiyaa
Dekedda Boosaaso waxa lagu dhisay
Deeq ay bixisay Dawladda Talyaaniga
Hadana Insha Allah Deeq lagu balaariyo waa
La helidoonaa oo aan shuruud lala socon.
La helidoonaa oo aan shuruud la socon.
Anigu waxaan qabaa maan in ay jaanis haystaan shacabka puntland iyo kan somaaliya ba lagana faaiidaysto hormarinta laga wado Dakada Boosaaso kuwa qaylinaya waxaa cad in ay yihiin hormar diid ama nabad diid iyo kuwo dana gaar ah leh waxaa cad oo lawada ogsoon yahay Ganacsatadu yihiin kuwa ka faa iiday Dakada Bosaaso waligooda Dhagax meel kama qaadin waxna kuma celin Dakada marka lkn waxaa lahubaa in shirkada maanta lagu wareejiyay Dakada inay dhisayso kana dhigayso dakad caalami ah marka 30 ayay joogaan ama haysanayaan ayaa laga cabanayaa haday rabaan 100 sano ha joogeen .